क्षति प्रारम्भिक विवरण, दुई हजार घर क्षतिग्रस्त - Everest Dainik - News from Nepal
क्षति प्रारम्भिक विवरण, दुई हजार घर क्षतिग्रस्त
वीरगञ्ज, चैत २१ । बारा–पर्सामा असिना–पानीसहित आइतबार आएको विनाशकारी हावाहुरीमा भएको धनजनको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक विवरण भने तयार भएको छ । बारा र पर्सामा दुई हजारभन्दा बढी घर बस्न नहुने गरी पूर्ण क्षति भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले तयार पारेर गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार बारामा मात्र हावाहुरीका कारण एक हजार ८९५ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । यसैगरी ९५५ घरमा भने आंशिक क्षति भएको छ । हावाहुरीले तीन वटा इँटा उद्योग र एक स्वास्थ्य चौकीमा समेत क्षति पु¥याएको छ । पर्सामा भने ४३७ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
हावाहुरीले सबैभन्दा धेरै क्षति बाराको परवानीपुरको वडा नं. ४ का चैनपुर, शिवपुर, रामटोल, बिर्ताटोल रहेका छन् । त्यहाँ ५४८ घरमध्ये तीन सय पूर्ण क्षति र २४८ आंशिक क्षति पुगेको हो । यसैगरी सुर्वण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ४, ५, ८ मा गरी ४३४ घरमा क्षति भएको छ । पूर्ण क्षति २६१ र १७३ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आँधीहुरी प्रभावितलाई प्रदेश ३ सरकारको १ करोड सहयोग, हेटौंडा सांसदले पनि ३ दिनको तलब दिने
कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ धर्मनगर तथा १८ भरवलिया र मनगढवा टोलमागरी २३२ कुलमध्ये १५७ पूर्ण क्षति र ७५ आंशिक क्षति भएको छ । यसैगरी फेटा गाउँपालिकामा ९६ घर भत्केका छन् । ६६ पूर्ण तथा ३१ आंशिक क्षति भएको छ । प्रसौनी गाउँपालिकामा १९४ घरमा क्षति भएको छ, जसमा ६८ पूर्ण र १२६ आंशिक क्षति पुगेको छ ।
यस्तै महागढीमाई नगरपालिका वडा नं. ७ तेलगाईमा ८६ घरमा क्षति भएको छ । जसमा २९ पूर्ण र ५७ घर आंशिक रुपमा ध्वस्त भएको छ ।
पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर २, ७ मा १७९ घरमा क्षति भएको छ । १९ घरमा पूर्ण र १६० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसैगरी देवताल गाउँपालिका ७ रमपूर्वा टोलमा १२५ घरमा क्षति भएको छ । जसमा ४० पूर्ण र ८५ आंशिक रुपमा क्षति भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस विनाशकारी आँधीबेहरीको त्यो रात
हावाहुरीका कारण हालसम्म बारामा २७ जनाले ज्यान गएको छ । जसमा १० पुरुष, ११ महिला, तीन बालक र चार बालिकाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा २३ जना नेपाली तथा चार जना भारतीय नागरिक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रजिअ पौडेलले व्यापक भएकोले पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्न केही समय लाग्ने भएको बताउँदै घटनामा परी चौपाया, अन्नबाली भौतिक संरचना तथा अन्य विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका अनुसार तत्काल अस्थायी बासस्थलको रुपमा २९८ थान टेन्ट वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन समिति बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । प्रजिअ पौडेलले प्रशासनले व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि धेरैजसो सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल तथा उनका भ्रातृ सङ्गठनले आफूले रुचाएको ठाँउमा सिधै राहत वितरण गर्ने गरिएकाले केही समस्या भइरहेको छ।
याे पनि पढ्नुस उद्धारमा सहयोगका लागि नेता आचार्यको टोलि राति नै मधेश झरेपछि.... (तस्वीर कथा)
यस्तै पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित वीरगञ्ज महानगरपालीकाको सुखचौना–१८ मा २२९ र जगरनाथपुरमा २०८ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बारा जिल्लाको तुलनामा पर्सा जिल्लामा कम क्षति भएकाले विवरण सङ्कलन गर्न केही सजिलो भएको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रराज शर्माको सयोंजकत्वमा राहत सङ्कलन तथा वितरण संयोजन समिति मार्फत एकद्वार प्रणलीद्वारा राहत वितरण भइरहेको र त्यसमा खासै समस्या नरेको उहाँले जानकारी दिए ।
सहयोगी संस्थाबाट राहतका सामग्री वितरण व्यवस्थित नहुँदा आएका राहत पनि सबैको भागमा नपुगेको पीडितहरूको गुनासो छ । गोरखापत्रबाट